प्रदेश सरकारको कामै छैन राज्यको खर्च बढाउने माध्यम मात्रै भयो : चन्द्र भण्डारी | Sunaulo Nepal
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.चन्द्र भण्डारीले नेपालको कानुनले नेताहरुसामु अत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् ।
सुनौलो नेपालसगँको कुराकानीमा नेता भण्डारीले देश सिध्याउन लागि परेकाहरु आज एक लाख धरौटि बुझाएर छुटेको भन्दै नेपालमा कानुन अनुसार व्याक्ति नभई व्याक्ति अनुसार कानुन पछि लागेको बताएका हुन् । “कानुनले तेरो मेरो व्याक्ति हेर्दैन गल्ति गर्ने जो काही होस कारवाही गर्नुपर्छ । नेपालमा कानुन ठिक छ तर कानुन अनुसार कसैलाई पनि कारवाही भएन ।” उनले भने देशको सिमा मिचिदा पनि नवोल्नेलाई हार्दिक श्रदाञ्जली भन्दा अरु केही भन्न सकिदैन ।
देशको सिमा सुरक्षाको विषयमा सरकार नबोल्ने, प्रतिपक्षले संसद चलाउन नदिने ? उनले भने “भारतमा मोदिले लिपुलेकमा सडक बनेकोबारे बोलेपछि प्रतिपक्षले संसद चल्न दिएर प्रधानमनत्रीले संसदमा यस विषयमा छलफन चलाउनुपर्ने थियो । ”
कम्युनिष्टहरुले ढाटेरै दुई तिहाई ल्याएकोमा त्यसलाई सम्हाल्न नसकेर ३ वर्षमानै पतन भएको बताउदै का्रग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि जनतामा खुशी दिन नसकोको दुखसो गरे । नेपालमा छिनछिनमा विभिन्न काण्डहरु आउने गरेको बताउदै नेता भण्डारीले देशको अस्तित्वमाथी आँच पुर्याउने जोकोहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने –“ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले ३ वर्ष सम्म छानविन गरेको फाईललाई एउटा सरकारी वकिलले पल्टाउनु कहाँ सम्मको अन्याय हो ? यस्तै ओम्नी काण्ड छ, अहिलेको नारायणहीटी दरवार संग्रांहलय काण्ड छ यी लगाएतका जतिपनि काण्डहरु छन् त्यसमा सामेल सवैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।”
उनले नारायणहीटी दरवार संग्राहलयमा रेष्टुरेण्ट चलाउन खोज्नेलाई होईन यसका लागि अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा उच्च पदमा बसेकाले देश समुन्नत बनाउने आम्दानी बढाउने बारेमा नसोचेर आफ्ना आसेपासेलाई राम्रो बनाउने सोच राखेका कारण देशमा परिवर्तन नभएको उनले ठोकुवा गरे ।
“मन्त्री प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनतालाई हेरेर योजनाहरु बनाउनुपर्छ । आफ्ना मान्छेलाई रोजगारि दिने योजना बनाईयो भने कसरी देशको विकास हुन्छ ?”
नेपाली नेतासगँ देशको सिमा सुरक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, पुर्वाधारमा जनताको पहँच र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने एजेण्डा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसको उनको भनाई छ । नोपली काग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले सक्षम युवाहरुलाई नेतृत्वमा पुर्याएको बताउदै संसदमा सक्षम व्याक्ति पुर्याउनका लागि सक्षम मानिसलाई पार्टीले टिकट दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारको कुनै काम नै नभएको बताउदै नेता भण्डारीले प्रदेश सरकार राज्यको खर्च बढाउन मात्रै भएको पनि जिकिर गरे । “स्थानिय तह बरु जनतासामु पग्न खोजेको छ तर प्रदेश सरकारको त केही कामै छैन राज्यको खर्च बढाउन मात्रै जस्तो देखिएको छ ”–उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धन नफाप्ने बताउदै आउने चुनावहरुमा काग्रेस एक्लै जानुपर्ने पनि उनले बताए ।